Mitomany An’Ilay Japone Mpanao Gazety Mahery Fo Izao Tontolo Izao, Tapa-Doha Nohon’ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2015 13:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, 日本語, English
Tao anatin'ny lahatsary iray amin'ny kalitao-nà finday izay nalaina taloha kelin'ny nidirana tao Al-Raqqa, foiben'ny Fanjakana Islamika (EST), nilaza i Kenji Goto, Japoneny mpanao gazety, fa nijaly nandritry ny telo taona sy tapany ny mponina Siriana, ary mihevitra ny hitatitra momba ny Fanjakana Islamika sy ny asa ataony any Siria izy. “Ampy izay” hoy izy.
Ny 1 febroary, ren’izao tontolo izao ny vaovao momba ny nahafatesan’i Goto tany amin'ny mpitarika ny vondron'ireo mpihoko, andro vitsy monja taorian’ny fitakian'ny vadiny ny hamelàna azy ho velona.
Araky ny voalazan’i Rinko, ny 25 oktobra 2014 i Goto no nosamborin’ilay fikambanana mahery fihetsika. “Nanomboka teo dia niasa mafy mangina tsy nitandro hasasarana aho mba hanafahana azy”, hoy izy tao anaty tatitra iray voarakitra an-tsoratra. “Hatramin'izao aho dia tsy nanao fanambarana aho mba hiarovana ireo zanako sy ny fianakaviako tamin'ireo haino aman-jery noho ny toe-draharaha mikasika an'i Kenji izay niteraka toe-javatra manahirana maneran-tany”.
Nitantara am-pahamalinana ny fandroson'ny toe-draharaha ilay ramatoa vadiny ary nilaza fa ireo mpihoko dia nifandray mailaka taminy ny 2 desambra 2014. Na izany aza, taorian'ny nivoahan'ilay lahatsary mangataka vola vidin'aina 200 tapitrisa dolara ho an'i Goto sy Haruna Yukawa , sahabo iray volana sy tapany taty aoriana, “nisy mailaka maromaro nifandraisanay sy ireo andian'olona satria izaho miady mba hiarovana ny ainy”, hoy ihany izy.
Na izany aza dia notapahan'ireo andian'olona ny lohan'i Yukawa taorian'ny fotoana farany handoavana ny vola vidin'aina. Nilaza tamin'i Rinko izy ireo ny amin'ny fara-fangatahany izay hanafaka an'i Goto raha toa ka manafaka ilay Irakiana mpanao vy very ny ainy, Sajida al-Rishawi ao am-pigadrana ny fitondrana Jordaniana.
Nangataka ny mpikomy mba ho i Rinko no hampahafantatra an'io amin'ny “fampahalalam-baovao eran-tany izao”, na hisy fiatraikany amin'ny fahaveloman'i Goto toy ny an'ilay Jordaniana mpanamory voasambotra, ny lietnà Mu'ath al-Kaseasbeh, Na teo aza ny fanekena sy ezaka matetika nataony hiarovana ny ainy, toa hoe notapahan'ireo andian'olona mahery fihetsika ihany ny lohan'i Goto hita tamin'ny horonantsary, navoakany taty aoriana.
Angamba ny lova lehibe indrindra navelan'ny fiantraikan'i Goto teo amin'ny fiainan'ny olona dia ny fanoherana nanerana izao tontolo izao ny asa farany nataon'ilay andian'olona mahery fihetsika. Lavin'izao tontolo izao ny hahatsiahy an'i Goto miankina amin'izay nataon'ny Fanjakana Islamika azy. Ho takalony, maro ny olona tahàka an'i Karim no mankalaza azy noho ny fiaraha-mientana nananany niarahany tamin'ireo izay any amin'ny faritra misy fifanolanana :
Latsa-dranomaso i Kenji Goto rehefa nahita ny fijalian'ny Siriana tao Aleppo. Izao indray dia ny Siriana no latsa-dranomaso ho azy.
Miarahaba an'i Goto ilay Siriana bilaogera, Nader, nohon'ny herim-pony :
Arahabaina i Kenji Goto, tena maneho firaisankina maneran-tany, tsy tahaka ireo mpanjanaka tontakelin'ny ISIS, izay tonga avy lavitra mba hifehy fotsiny ny mponina eo an-toerana. (RIP)
Nanamarika i Haya Atassi, manana maripahazaina avy amin'ny Oniversite Amerikana ao Beyrouth, fa nanao mihoatra noho ny asany ilay mpanao gazety manana traikefa :
#KenjiGoto, ilay Japone mpanao gazety notapahan'ny #ISIS ny lohany, dia nanokatra sekoly hampianarana solosaina ny ankizy Siriana tao ambanivohitr'i #Lattakia
Manamafy ny hevitry ny maro i Jean Pierre Duthion, izay nilaza tao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny Twitter fa nonina tany Siria izy tao anatin'ny fito taona farany,
Laviko ny hamoaka ny sary mampiseho azy ho toy ny traboinan'ny #ISIS. #KenjiGoto io, notapahan'izy ireo ny lohany omaly
Ilay Saodiana mpanakanto, Malik Najer, dia naneho fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i Goto, toy izay efa nataon'ny olona maro :
Malik Nejer avy aty Arabia Saodita ihany ity, mba te haneho fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i #KenjiGoto ny tenako, olona tsara izy, Handry am-piadànana anie izy
Dalaa AlMouft, Koeitiana mpanoratra an-gazety dia nilaza tamin'ny teny arabo no sady nametaka ny sarin'ny renin'i Goto mitomany, fa tsy ampy ho an'ny mpanao ratsy ao amin'ny IS ny mampihorohoro ireo reny arabo, fa mbola nitariny hatrany Japana izany fampihorohorona izany :
Tsy ampy ho an'ireo mpanatanteraka ao amin'ny IS ny mampihorohoro ireo reny arabo, fa mbola nitarina hatrany Japana izany fampihorohorona izany. Ny renin'ilay Japone mpanao gazety notapahan'ny ISIS ny lohany
Ireo olo-malaza sy ireo mpanao politika koa dia samy naneho fiaraha-miory. Ilay mpanoratra fanta-daza, Paulo Coelho, dia nidera an'i Goto tao anaty bitsika iray, ary nampiaka-peo mba ho firaisankina amin'i Lietnà Al-Kaseasbeh amin'ny fampiasana ny tenifototra #IamMuath
Velona ao am-pontsika, #KenjiGoto mahery fo. Fotoana ilazana hoe #IamMuath na dia mieritreritra aza aho (tsy avelan'Andriamanitra) fa efa maty izy
Ny fanambarana nataon'i John Kerry, Sekreteram-panjakana Amerikana, dia tsy manadino ny milaza fa asa feno habibiana no nahafatesan'i Goto :
My heartfelt condolences to Kenji Goto's wife, his family, and the people of Japan. His barbaric murder shows ISIL's brutality..
Manolotra ny fiaraha-miora amin'ny fo feno alahelo ho an'ny vadin'i Goto, ny fianakaviany ary ny vahoaka Japone ny tenako. Ny famonoana azy tamin'ny fomba feno habibiana dia mampiseho ny herisetra ataon'ny ISIS.
Na ilay kaonty Historical Pics Twitter tsy fantatra izay mitantana azy aza, izay misy mpanjohy 2,02 tapitrisa, dia manainga ny rehetra mba hahatsiaro an'i Goto noho ny halemem-panahiny, amin'ny famerenana mizara ny sariny izay ahitana azy mitafa amin'ireo tanora Siriana :
Io no maneho ny fomba tokony hahatsiarovantsika rehetra an'i Goto, lehilahy iray tena mahery fo sy miavaka
Na izany aza, betsaka no tohina tamin'ny nandrenesana ny fahafatesany. Nilaza i Emily Finch izay mipetraka ao Londona hoe :
Nahatsapa fihetseham-po mahery vaika taorian'ny famonoana an'i Kenji Goto raha nanaraka ny tantara hatramin'ny niandohany.
Dima Khatib, mpanao gazety, dia naneho ny alahelony fa ny fihetsika toy ireny dia tanterahana, tsy any Siria ihany, fa koa amin'ny hevitra diso amin'ny anaran'i Islam :
Tena mampalahelo ny mahita olona tahaka an'i #KenjiGoto (na olon-kafa) tapa-doha, tany Siria izay firenena nahaterahako, amin'ny anaran'ny Islam. #Arab
Ary Boutaïna Azzabi, mpanao gazety tsy miankina, dia mizara tsiahy iray mampieritreritra fa nahatratra 118 ny mpanao gazety novonoina tamin'ny taona lasa :
Mpanao gazety hafa indray no notapahan'ny ISIS loha, ilay mpanao gazety #KenjiGoto. – tamin'ny 2014 fotsiny dia nahatratra 118 ny mpanao gazety novonoina ary 220 no notànana am-ponja maneran-tany
Ny vadiny, ireo zanany vavikely roa taona sy volana vitsivitsy no mamelona ny tantaran'ilay rangahy 47 taona.